Misava ny tahotra hijoro ho vavolombelona
"Ka nanao hoe: Efa noraranay mafy dia mafy hianareo tsy hampianatra amin'izany anarana izany; kanjo, indro, efa nofenoinareo ny fampianaranareo Jerosalema, ka tianareo hankinina aminay ny ran 'izany Lehilahy izany. Fa Petera sy ny Apostoly namaly ka nanao hoe: Andriamanitra no tokony hekena mihoatra noho ny olona." - Asa. 5:28,29.
Henoko ireo nitafy ny fiadiana rehetra nitory ny fahamarinana tamin-kery lehibe. Nisy akony lehibe izany. Hitako ireo izay nofatorana; nisy renim-pianakaviana sasany nofatoran'ny vadiny, ary nisy ankizy sasany nofatoran'ny ray aman-dreniny. Ireo tso-po izay nohazonina na norarana tsy hihaino ny fahamarinana dia mifikitra amin-kafanam-po amin'izany ankehitriny. Misava avokoa ny tahony manoloana ireo havany. Ny fahamarinana irery ihany no nasandratr'izy ireo. Mamy kokoa ary sarobidy kokoa noho ny aina izany. Noana sy nangetaheta ny fahamarinana izy ireo. Nanontany ny antony nahatonga io fiovana lehibe io aho. Nisy anjely iray namaly hoe: "Ny ranonorana farany no nahatonga io; ny famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'Andriamanitra; ny feo maherin'ny anjely fahatelo." Nisy hery lehibe nomba ireo voafidy ireo. by ilay anjely: "Jereo ange!" Nitodika tamin'ireo ratsy fanahy, na ireo tsy mpino, ny masoko. Nihetsiketsika avokoa izy rehetra. Nanaitra sy naharomotra azy ny hafanam-po sy ny herin'ny vahoakan'Andriamanitra. Teny rehetra teny ny fisavorovoroana.
Hitako ny fepetra hentitra noraisina hamelezana io vondron'olona io, dia ireo izay manana ny herin'Andriamanitra sy ny fahazavany. Nanarona azy ireo ny haizina, kanefa nijoro hatrany izy ireo, nankasitrahan'Andriamanitra ary nitoky taminy. Hitako ny fahaverezan-kevitra teo aminy. Taorian' izay dianandre azy ireo nitalaho tamin-kafanam-po tamin'Andriamanitra aho. Tsy nitsahatra andro aman'alina ny fitalahoany. Reko ireto teny ireto: "Ny sitraponao anie Andriamanitra no aoka ho tanteraka! Raha hanome voninahitra ny anaranao ny fahafahan'ny vahoakanao, dia manamboara lalana handosiranay! Vonj e o amin' ireto jentilisa izay manodidina anay ireto izahay! Nikendry ny hamono anay izy ireo, kanefa afaka mamonjy anay ny sandrinao." Ireo no teny rehetra tadidiko. Toa nahatsiaro lalina ny tsy fahamendrehany izy ireo, ka naneho fileferana tanteraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Na izany aza, ny tsirairay, tsy ankanavaka, dia nitalaho sy nitolona tamin-kafanam-po ho amin'ny fanafahana, tahaka an'i Jalapa. — RH, 31 Desambra 1857.